.: ရခိုင်တေးရွီးဆရာ ဦးမောင်သန်းဧ။် ဂီတခရီးလမ်းက ပန်းဝေဒနာ
ရခိုင်တေးရွီးဆရာ ဦးမောင်သန်းဧ။် ဂီတခရီးလမ်းက ပန်းဝေဒနာ
နာမေ - ဦးမောင်သန်း
အနုပိုင်ညာနာမေ - ဂီတစာဆို- ပွဲဝင်ရခိုင်အဆိုတော်
အသက် - ၅၈ နှစ်
တီးခတ်မှု - မယ်ဒလင်၊ စည်းဝါး
နီရပ်လိပ်စာ - ၀ိသာခါလက်ကြား၊ ဆင်ကူလမ်း၇ပ်ကွက်
မီး ။ ဆရာမွီးရပ်ဇာတိမြီကို သိချင်ပါရေ။ မိသားစုအကြောင်းပါ ပြောပါဆရာ။
ဖြီ။ ကျွန်တော့် မွီးရပ်မြီမှာ စစ်တွေမြို့ အနောက်သဲချောင်းရွာ ဇာတိပါ။ အဖ ဦးစံအောင်၊ အမိ ဒေါ်ညွန့်ဖြစ်ပြီးကေ မွီးချင်း သုံးယောက်အနက် ကျွန်တော်က အကြီးဆုံးပါ။ အခု ကျွန်တော် ၀ိသာခါလက်ကြား၊ ဆင်ကူးလမ်းရပ်ကွက်မှာ နီထိုင်လျက် ဟိပါရေ။
မီး။ ။ တေးဂီတ အနုပိုင်ညာနယ်ကို စတင်ဝင်ရောက်တေခုနှစ်၊ စတင်ရွီးခရေတေးခြင်းနန့် ဆရာ့တေးခြင်းကို စတင်သီဆိုခရေ အဆိုတော်နာမေကို သိချင်ပါရေ။
ဖြီ။ ။ တေးဂီတနယ်ကို အသက် (၁၇-၁၈)နှစ်ကပင် စတင်ဝင်ရောက်ခါပရေ။ စတင်ရွီးစပ်ခရေတေးခြင်းက သစ္စာပန်းမနွမ်းစီချင်ပါ ဆိုရေ တေးခြင်းပါ။ ဒေတေးခြင်းကို ဦးမောင်သိန်း၊ ဦးကျော်လှ၊ ခင်အေးချိုရို့တိတ်ခွေနန့် ဆိုကတ်ပါရေ။
မီး။ ။ အဂုအချိန်ထိ ဆရာ၇ွီးရေ ရခိုင်တေးခြင်း စုစုပေါင်း ဇာနှစ်ပုဒ်ဟိဗျာလ်လဲဆိုစွာကို မှတ်တမ်းတင်ပီးပါ ဆရာ။
ဖြီ။ ။တေးခြင်း ဇာနှစ်ပုဒ်ဆိုစွာ တိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်မှတ်မထားမိပါ။ ခန့်မှန်းခြီကတော့ခါ လေးငါးဆယ်လောက် ဟိပါဖို့။
မီး။ ။ ဆရာတေးခြင်းရွီးစွာမှာ ဇာသူ့အတွက် ဇာသူဆိုဖို့ဆိုပြီးကေ ရွီးစွာပါလာ။ ရွီးပြီးခါမှ တေးခြင်းနန့် ကီးကိုက်တေ အဆိုတော်ကို ပီးလိုက်စွာပါလာ။
ဖြီ။ ။ တချိန်တုန်းက ကိုယ်တိုင်သီဆိုဖို့ ရွေစူးခပါရေ။ ယေကေလေ့ မဆိုဖြစ်ခပါ။ ကိုယ်စပ်တေ တေးခြင်းနန့်လိုက်ဖို့ အဆိုတော်တိကို ပီးလိုက်ပါရေ။
မီး။ ။ ဆရာတေးခြင်းရွီးပြီးကေ တီးလုံးသံစိုင်ကို ကိုယ်တိုင်ရှာပါလာ။ အတီးပညာသျှင်တိကို အပ်ပါလာ။
ဖြီ။ ။ သံစိုင်နန့်ကျကေ တီးပြီးကေ ရှာပါရေ …….. ရှာပြီးကေ တီးပါရေ။ ယေကေလေ့ အများအားဖြင့် ဂီတမှူးဆရာထွန်းသိန်း၊ သံစိုင်ရှာပီးစွာ များပါရေ။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လေ့ စင်ထက်မှာ တက်ပြီးဆိုလို့ ထန်းပင်ရင်းပြိုင်ပွဲ၊ ၀င်္ကဘာကွင်းမှာလုပ်တေ အဆိုပြိုင်ပွဲတိမှာ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုတိ ရခဖူးပါရေ။
မီး။ ။ ဆရာ ဦးမောင်သန်းတေးခြင်းရွီးစွာမှာ အချစ်တေးခြင်း (၅၂၈) (၁၅၀၀) မိတ္တာဘွဲ့တိများပါလာ။
ဖြီ။ ။ ကျွန်တော် တေးခြင်းရွီးစော်မှာ အမျိုးသားရီး၊ ဘာသာရီးနန့် တစ်ပင်တိုင် သဘာဝအလွမ်းဓာတ်ခံတေးခြင်းတိ များပါရေ။
မီး။ ။ ဆရာရို့တေးခြင်းသွင်းခရေ ထိုးအယင်ခေတ်က ခေတ်မီတေးသံသွင်း စတီရီယိုတိ မဟိခသိဆိုခါ၊ ဇာပိုင်အခက်အခဲတိနဲ့ အသံသွင်းခရလေဆိုစွာကို မှတ်တမ်းအဖြစ် ပြောပြပါဆရာ။
ဖြီ။ ။ ကျွန်တော်ရို့ အသံသွင်းခဂတ်တေခါ ခေတ်မမီပါ။ ခွီးတစ်ကောင်ဟောင်ကေလေ့ ပျက်ပါရေ။ ပြန်သွင်းရပါရေ။ ဂါရီတစ်စီးဖြတ်မောင်းလားခကေလေ့ ပျက်ပါဗျာလ်။ ပြန်သွင်း။ ကကောင်းဒုက္ခမျိုးစုံခံခရေ။ စိတ်ရှေခရပါရေ။ ဒေကိစ္စကို ရွှေဒဂါး ကိုအေးကြည်နန့် တီးဝိုင်းခေါင်းဆောင် ဆရာထွန်းသိန်းရို့ သိကတ်ပါယင့်။ အဖြည့်ခံကျွန်တော့်ဘ၀မှာ စင်ထက်က ကြယ်ပွင့်တိအတွက် လမ်းပန်းခင်းပီးလိုက်စွာပါ။
မီး။ ။ ဆရာနန့်ခေတ်ပြိုင် အယင်က ဂီတဆရာတိ၊ ဇာသူဇာတီးခကတ်လေဆိုစွာ မှတ်တမ်းတင်ပီးပါ ဆရာ။
ဖြီ။ ။ ဟုတ်ပါရေ။ ကျွန်တော် တက်ကြွနုပျိုစိုင်အခါက ကြုံခဆုံခကတ်တေ သစ္စာသျှင်တီးဝိုင်းက ဂီတမိတ်ဆွေတိကို ပြောပြပါမေ။
၁။ ဂီတမှူး ဆရာထွန်းသိန်း (ဒုံမင်း၊ မယ်ဒလင်၊ တယော၊ အော်ဂင်၊ မြန်မာဂီတာ)
၂။ ကိုကျော်ထွန်းသာ (ကွယ်လွန်) (ဒုံမင်း၊ မယ်ဒလင်၊ မြန်မာဂီတာ)
၃။ ကျောင်းဆရာ ကိုကျော်သိန်းမောင် (မယ်ဒလင်၊ မြန်မာဂီတာ)
၄။ ကိုမောင်အေးထွန်း (ဘင်ဂျို၊ မယ်ဒလင်)
၅။ ကိုဦးခင်မောင် (မယ်ဒလင်)
၆။ ကိုကျော်သိန်း (ကွယ်လွန်) (ပလွီ)
၇။ ကိုမောင်ကျော်ညွန့် (ဗုံဆရာ)
၈။ မခင်စမ်းရီ (အဆိုတော်) ၇ို့ ဖြိုက်ကတ်ပါရေ။
မီး။ ။ရခိုင်အဆိုတော်တိ ဆရာရွီးရေတေးခြင်းတိကို စင်ထက်မှာ ဆိုကတ်တေခါ တေးရွီးဆရာ ဦးမောင်သန်းရွီးရေ တေးခြင်းပါလို့ ဖော်ထုတ်ပြောဆိုပြီးကေ ဆိုကတ်ပါယင့်လား။
ဖြီ။ ။ တစ်ချိတ်တစ်ခါက စင်ထက်မှာ တေးခြင်းဆိုခကတ်တေ ချန်ပီယံ ဦးမောင်သိန်း၊ ဦးကျော်လှ၊ ညီမ ၀င်းမေနန့် ဦးမြကျော်ရို့တေးခြင်းဆိုခါ ကျွန်တော် ရွီးရေတေးခြင်းကို ဆိုစွာပါလို့ ဖော်ထုတ်ဆိုခကတ်ပါယင့်။ အခု တေးရွီးဆရာကို ဖော်ထုတ်ဆိုကတ်စွာ နည်းလာပါဗျာလ်။ ပဉ္စ၀တီအက်ဖန်က ဂီတစာဆို အခင်ထွန်း (စစ်တွေ) ရွီးရေတေးခြင်းတစ်ပုဒ်ကို ကိုထွန်းအောင်သာ ရွီးရေလို့ မှားပြီးကေ အသံလွင့်ခရေလို့ ကိုဦးထွန်းလှ (အခင်ထွန်း)က ပြောပြဖူးပါယင့်။
မီး။ ။ တေးခြင်းရွီးဆရာတစ်ယောက်စွာ ငြမ်းနန့်တူရေလို့ ပြောကတ်ပါရေ။ ဆရာ့တေးခြင်းကို သီဆိုပြီးကေ ထင်ပေါ်လို့ စင်တော်ကိုတက်လားခခါ နာမေကြီးအဆိုတော်ဖြိုက်လာခခါ ဆရာ့ကို ဆရာမှန်းသိတတ်ကတ်ပါသိယင့်လား။ မသိတတ်ကတ်ကေ ဇာပိုင် ခံစားရပါလေ။
ဖြီ။ ။ ကျွန်တော့်တေးခြင်းတိနန့် နာမေကြီးအဆိုတော် ဖြိုက်လားခလို့ ဆရာမှန်းမသိစွာက သူရို့အကြောင်းတရားပါ။ ကျွန်တော် ခွင့်လွှတ်ပါရေ။
မီး။ ။ ဆရာနဲ့လက်တွဲဖော်လက်တွဲဖက်၊ တေးခြင်းရွီးခကတ်တေ တေးရွီးဆရာတိ၊ ဆိုခကတ်တေ အဆိုတော်ဟောင်းတိကိုလေ့ မှတ်တမ်းကျန်လိုက်အောင် မှတ်တမ်းတင်ပြောပြပီးစီချင်ပါရေ။
ဖြီ။ ။ ကျွန်တော်နန့် တေးခြင်းရွီးကတ်တေ စစ်တွေက မှတ်မိသလောက် ဦးထွန်းအောင်သာ (တေးရွီး)၊ ဂီတမှူး ဆရာထွန်းသိန်း (တေးရွီး)၊ ကိုဒိုးမောင် (တေးရွီး)၊ ဦးမြကျော် (တေးရွီး)၊ ဟန်သိန်းမောင် (တေးရွီး)၊ ဆရာ စစ်တွေညိုသန့် (တေးရွီး)၊ မောင်ကျော်သာ (တေးရွီး)ရို့ ဖြိုက်ကတ်ပါရေ။ မမှတ်မိလို့ မဖော်ပြနိုင်စွာကိုလေ့ ခွင့်လွှတ်ကတ်ပါလို့။
မီး။ ။ ဆရာရွီးခရေတေးခြင်းတိ အထဲက ဇာတေးခြင်းကို အကြိုက်ဆုံးပါလေ ဆရာ။
ဖြီ။ ။ ကျွန်တော်ရွီစွာတေးခြင်းတိထဲမှာ ပန်ဝေဒနာကို အကြိုက်ဆုံးပါ။ ဦးမောင်သိန်းဆိုစွာပါ။ အမှန်ပြော၇ဖို့ဆိုကေ ကျွန်တော့်မယား အပျိုကြီးကို ကျွန်တော် လူပျိုကြီး က ဒေတေးခြင်းနန့် ရအောင်ယူခစွာပါ။
မီး။ ။ ဆရာရွီးရေ ပန်းဝေဒနာတေးခြင်းကို ဝေဖန်စွာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်လိုက်ရပါရေ။ ဆရာဇာပိုင် ပြန်ပြောချင်ပါလေ။
ဖြီ။ ။ ပေါက်တော ရွှေမြေမဂ္ဂဇင်းမှာ ပန်ဝေဒနာတေးခြင်းကို အမ်တီတီက အမျိုးမျိုး ၀ီဖန်ထားပါရေ။ မကောင်းပြောကေလေ့ သူ၊ အကောင်းပြောကေလေ့ သူပါ။ ပန်းဝေဒနာတေးခြင်းကို တေးစာသားနန့် မဆီယေမှ မဆိုင်လို့ ပြေ၀ံ့သူပါ။ ဆရာ အမ်တီတီကိုမှချင်ပါရေ။ ယင်းပန်းဝေဒနာတေးခြင်းကို အအီဆဆီး အသည်းနှလုံးနန့် စစိနနန်ခံစား နားထောင်ကြည့်ပါလို့။ ဆရာ စစ်တွေညိုသန့်က အကြိုက်ဆုံးတေးခြင်းလို့ ကျွန်တော့်ကို တစ်ခါပြောဖူးရေ တေးခြင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
မီး။ ။ ရခိုင်တေးခြင်းရွီးရေ၊ ရွီးနီရေ ဆရာ တစ်ယောက်အနီနန့် ဥာဏ်ပူဇော်ခရဖူးပါလာ။ အများဆုံး ဇာလောက် ရဖူးပါလေ။
ဖြီ။ ။ အယင်က တေးရွီးဥာဏ်ပူဇော်ခ အခါခါ ရဖူးပါရေ။ ဒေခေတ်နန့်ဆိုကေ မပြောစလောက်ပါရာ။ ဒန်းဂါးရစွာ မရစွာထက် ဈာန်ဝင်လာကေ တေးခြင်းမရွီးဘဲက မနီနိုင်ပါ။ အနုပညာသမားတိုင်း အားလုံးသိကတ်ပါရေ။
မီး။ ။ ဆရာ့တပည့်တိထဲက ဆိုကရေးတီး နိုင်ငံတော်အဆင့်ပြိုင်ပွဲမှာ ဆုရကတ်စွာတိ ဟိပါလာ။ ဇာအဆိုတော်တိ ရကတ်လေဆိုစွာ သိချင်ပါရေ။
ဖြီး။ ။ ကျွန်တော့်တပည်တိအထဲက နိုင်ငံတော် အဆင့် ဆိုကရေးတီးပြိုင်ပွဲမှာ ရွှီတံဆိပ်ရဘူးသူက ချန်ပီယံအဆိုတော်ကြီး ဦးမောင်သိန်း၊ အခုဆိုကေ ဒိုင်လူကြီးတောင် ၀င်လုပ်နီပါဗျာလ်။
မီး။ ။ ဆရာ့မှာ သားသမီးဇာနှစ်ယောက်ဟိပါလေ။ အမွီဆက်ခံဘိုး ဂီတမျိုးဆက်သစ် ဇာနှစ်ယောက်ပါ ပါလေ။
ဖြီ။ ။ ကျွန်တော့်မှာ သားသမီးသုံးယောက်ဟိပါရေ။ သားအကြီးဆုံးက မောင်လွန်းလှဦး၊ ဥပေဒေ ဒုတိယနှစ်ပါ။ သမီးလတ် မစန္ဒာလီက ဆယ်တန်းဖြေပြီးပါဗျာလ်။ သားအငယ်ဆုံး မောင်ရန်ရှင်းအောင်က စတုတ္ထတန်းပါ။ သားကြီးက စိုင်းဒြားစည်အဖွဲ့မှာ ပွဲတိုင်းကျော်ပါ။ သမီးလတ်က ထန်ပင်ရင်းအဆိုပြိုင်ပွဲမှာ ဆုကြီးတိ ရဘူးပါရေ။
မီး။ ။ တေးရွီးဆရာဘ၀မှာ သာရီးနာရီးကိစ္စတိပေါ်လာကေ အချင်းချင်းအကူအညီပီးကတ်ဘို့ အသင်းဖွဲ့ထားစွာတိ ဟိထားပါလာ။ မဟိသိကေ ဖွဲ့စည်းကတ်ရဘို့ အချိန်တန်ဗယ်လို့ မြင်ပါလာ ဆရာ။
ဖြီ။ ။ ဂီတအစည်းအရုံး (ဗဟို)က ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လာရောက်ဖွဲ့စည်းဘို့ မကြာခင်လာဘို့လို့တော့ သတင်းကြားထားပါယင့်။
မီး။ ။ မီးနီကျမီးခွန်းပါ။ ရခိုင်တေးဂီတလောကမှာ ရခိုင်မိုနိုတေးခြင်းတိ ပျောက်ကွယ်မလားအောင် ဇာပိုင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်လားရဘို့လေ့ဆိုစွာ ဆရာ ဆန္ဒသဘောထားကို သိချင်ပါရေ။
ဖြီ။ ။ ရခိုင်မိုနိုတေးခြင်းတိ မပျောက်အောင် မိုနိုရခိုင်တေးခြင်းပြိုင်ပွဲ အများကြီးလုပ်ပီးရပါဘို့။ တက်သစ်စ အဆိုတော်ချေတိကို မြီတောင်မြှောက်ပီးရပါဘို့။ ဒေကိစ္စက ချချင်းချေပါရာ ။ သိတတ်တေး တတ်နိုင်ရေ လူကြီးတိက စိတ်ဝင်တစားလုပ်ပီးလားနိုင်ကေတာ့ခါ ယိုင်ကျေးမှုမပျောက်ဆိုစွာ အားလုံး သိပြီး ဖြိုက်ပါရေ။
မီး။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဂီတ အနုပိုင်ညာသျှင်ိ၊ ရခိုင်အဆိုတော်တိကို ဆရာ ဇာမှာကြားချင်ပါလေ။ ၀ံသရက္ခတ မဂ္ဂဇင်းက တစ်ဆင့်မှာကြားလိုက်ပါဆရာ။
ဖြီ။ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ဂီတအနုပိုင်ညာသျှင်တိ၊ အဆိုတော်တိ၊ တေးရွီးဆရာတိ၊ အများကြီး………. အများကြီးကြိုးစားလို့ အမျိုးဂုဏ်မြင့်အောင် စွမ်းဆောင်ကတ်ပါလို့ အနူးအညွတ်မှာကြားချင်ပါရေ။
မီးခွန်းတိကို စိတ်ရှေ၊ လက်ရှေ ဖြီပီးရေအတွက် ကကောင်းကျေးဇူးတင်ဟိပါရေ။ တေးရွီးဆရာ ဆရာ ဦးမောင်သန်းတစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာနန့် တေးခြင်းတိ အများကြီးရွီးနိုင်ပါစီ။ မိုနိုအဆိုတော် မျိုးဆက်သစ်တိ ပေါ်ထွက်လာအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပါစီလို့ မိတ္တာပို့သလိုက်ပါရေ။
(အေနိန်ရာက ကူယူလို့ဖော်ပြလိုက်ပါရေ။ )